रोचक-विचित्र — Bhugolnews
Posted by Bhugol News | रोचक-विचित्र
काठमाडौं । यस पटक भने अस्मिता राजी भइन्। उनीसँग उम्कन कुनै बाटो थिएन। त्यसो त उनले केशवलाई समेत मन पराउन थालिसकेकी थिइन्। एक वर्षसम्म आफूलाई नै कुरेर बसेपछि अस्मिताको मनमा केशवप्रति थप माया र विश्वास...बाँकी
एजेन्सी । व्यवसायी तथा एसियाकै धनि मुकेश अम्बानीका कान्छा छोरा अनन्त अम्बानीले १८ महिनामै १०८ किलो तौल घटाएका छन् । सन् १९९५ मा जन्मिएका अनन्तको तौल ५ वर्ष पहिले १७५ किलो थियो । अत्याधिक माटोपनको...बाँकी
आजकाल स–सानो कुरामा सम्बन्ध टुट्ने स्थितीमा पुग्छ । सम्बन्धविच्छेदका विभिन्न किस्सा त तपाईंले सुन्नुभएकै होला तर मध्यप्रदेशको पारिवारिक अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको एउटा यस्तो मामला सार्वजनिक भएको छ जसले तपाईंलाई आश्चर्यमा पार्नेछ । सम्बन्धविच्छेदको निवेदनमा श्रीमतीले श्रीमानको...बाँकी
चीनको हुनान प्रान्तको जियांगमा पुलिसबाट भागेका चोरलाई पुलिसले नै उद्दार गर्नुपरेको छ । पुलिसले समात्ने डरले आफू बसेको भवनको झ्यालबाट भाग्ने कोसिस गर्ने क्रममा उनी २२ औं तल्लामा नराम्रोसँग फसे । पुलिसका अनुसार चोर पर्वतारोही...बाँकी
‘पढीलेखी के काम, हलो जोती खाए माम’ । नेपालीमा चर्चित यो भनाइले पढाइलाई भन्दा पनि श्रमलाई बढी महत्त्व दिने गर्छ । भिन्न सन्दर्भ र परिवेशमा यो भनाइको आफ्नै महत्त्व छ, होलान् । तर कम्तिमा पढ्ने...बाँकी
पूर्वीय संस्कृतिका मूल्य मान्यताको सम्मान गर्नका लागि भन्दै इण्डोनेसियाको एक उद्यानमा रहेका जलपरीका शालिकको वक्षस्थल छोपिएको छ । राजधानी जकार्ताको एनकोल ड्रिमल्याण्डभित्र दुईवटा जलपरीका मूर्ती रहेका छन् । पछिल्लो पन्ध्र वर्षदेखि पार्कभित्र रहेका ती मूर्तिको...बाँकी
अभिनेत्री प्रियंका कार्की भन्दा उमेरले कान्छो छन्, आयुशमान देशराज जोशी । उनीहरु विवाह गर्दैछन् । आयुशमानले आफुभन्दा बढी उमेरकी युवती नै किन रोजे ? यसको कारण त उनैलाई थाहा होला । यद्यपी यो प्रश्न चाहि...बाँकी
हाम्रा कति धर्म-परम्परा यस्ता छन्, जसलाई हामी जानी-नजानी अनुसरण गरिरहेका छौं । जस्तो प्रसाद किन खाइन्छ वा बनाइन्छ ? मन्त्र किन उच्चाहरण गरिन्छ ? कलश किन बनाइन्छ ? सिउँदोमा सिन्दुर किन राखिन्छ ? चरण स्पर्श...बाँकी
कहिलेकाहीँ दुनियाँमा यस्ता घटना हुन्छन्, जसले विज्ञान तथा प्रकृतिलाई नै चुनाैती दिने हैसियत राख्दछन् । बंगलादेशमा हालै यस्तै भएको छ, जसका कारण चिकित्सा जगत र आम मानिससमेत तीनछक परेका छन् । एकजना बंगलादेशी युवतीले एक...बाँकी
पहिलो शिशु जन्मिएको १ महिना नपुग्दै जुम्ल्याहा शिशु
काठमाडौं । बंगलादेशमा २० वर्षीया एक महिलाले पहिलो सन्तान जन्माएको २६ दिनपछि जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी छन्।पहिलो बच्चा जन्मिएको समयमा चिकित्सकले उनको पेटमा जुम्ल्याहा बच्चा भएको थाहा नपाएको बताएका छन्। आरिफा सुल्ताना इती नाम गरेकी युवतीले...बाँकी